Orin-tsaha - Mpanamboatra mpamatsy tsenan-tsakafo i Shina, mpamatsy
Ity karazana Hexagon Flange Nut ity dia antsoina ihany koa hoe pad nut, voninkazo - nify nut, flange nut sy ny sisa. Ampiasaina amin'ny fifandraisana fantsona na ho an'ny sangan'asa izay mila ampitomboina ny fifandraisana amin'ny voanjo. Izy io dia vita amin'ny fitaovana premium sy asa vita tsara. Izy io dia haingam-pandeha miaraka amin'ny kofehy anatiny ary ampiasaina miaraka amina bolts, ary azo ampiasaina koa ho singa mekanika ampiasaina miaraka amina skotera hampitana fihetsika na hery.
Ity karazan-tsolika vita amin'ny karbonina Zinc Plated Square Nut ity dia vita amin'ny vy karbonina avo lenta amin'ny fanamboarana asa tsara. Ny fatrany dia misy rindrina zinc ho an'ny aesthetics ary fisorohana ny harafesina. Matetika izy io dia miara-miasa amin'ny bolts (studs na screws) miaraka amina kofehy ivelany ary mampiasa fifandraisana anatiny sy ivelany mba hamatorana faritra roa mifangaro, singa, sns, rehefa mivory sy manaisotra ny karbera Zinc Plated Square Nut misy ny karbona, tsy mora izany. solafaka, fa afaka mampiasa ravitra azo zahana ihany, maty maty, tanjona roa (fanokafana), na rindran-damosin'ilay fantsom-baravarana manokana ho an'ny fivoriambe sy fanesorana.
Inona ny voaroy fanalahidy nilona: miantehitra amin'ny mpanasa ny nilona ny fiasan'ny mason-koditra, ny hidin-trano hidona ny nilona, ​​ny indostria dia matetika antsoina hoe "cap.Primima miaraka amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy na kofehy vita amin'ny bolt, toy ny ny nilona taorian'ny fika hamatony ny lakile. amin'ny endriny, ny faran'ny roa famarana hantsana famenoana, dia toy izany no fanidiana.
Famandrihana anarana momba ny vokatra eo amin'ny marika Model Number M4-M36 Material: Karibao vita amin'ny karbonika 4.8 8.8 Mivadika, tsara
Hex nut DIN985 DIN982 DIN934 Fitaovana karbonina vita amin'ny vovo-tany Plain, zinc plated (fotsy, mavo), Black oxide Size M3-M56 Kilasy 4.8 8.8 Sampy azo omena ny ohatra maimaim-poana MOQ 1 TON / araka ny takian'ny mpanjifa Package Carton, pallet term pay Payment T / TL / C Fotoanan'ny fandefasana 1530 andro na arakaraka ny volan'ny vidin'ny USD isaky ny Ton FOB / CIF / CFR / EXW tombony dia trano izahay DIN934 hex n ...
Famandrihana Vatana amin'ny tanjaka M2-M100 Solika Karibona vita amin'ny vokatra na araka ny zavatra takiana. Sokajy kilasy: 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 Lafiny famaranana vita, vita, (ROHS) Zn-plated, Ni-plated, araka ny fangatahana anao. Standard DIN GB ISO JIS BA ANSI Certification ISO9001, SGS, CTI, ROHS Tsy misy fenitra OEM dia manome raha manome sary na santionany ianao.